Component 1 – Ayeyarwady Intergrated River Basin Management (AIRBM) Project
Component (1) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေတို၊ ရေလတ်၊ ရေရှည်ကာလအားလုံးတို့ အတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်သောအ ခြေခံ အုတ်မြစ်များကိုချ ပေး သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
Water Resources Institutions (NWRC, etc.), Decision Support Systems, Hydro-Informatics Centre, Ayeyarwady River Basin Master Plan, new Investments, and Capacity Building.
Component (1) တွင် အဓိက လုပ်ငန်းစဉ် (၇) ခုပါရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ကိုသုံးသပ်လေ့လာတင်ပြခြင်း နှင့် ထိုအဖွဲ့အစည်းများကို စနစ်တကျ အထောက်အကူပြု ပံ့ပိုးရန် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံး လုပ် နည်းများ၊ စံချိန်စံညွန်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အစရှိ သည်တို့ကိုသက်ဆိုင်ရာတို့က အ ကောင်အထည် ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လေ့လာ တင်ပြခြင်း။ ပြည်ထောင်စု အဆင့် နှင့် တိုင်း/ ဒေသ ကြီးအဆင့်တို့ စည်းချက် ညီစွာ ပေါင်းစပ် ဆက်သွယ်၍ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် လေ့လာ၍ဖန်တီးပေးရန်။ (Institutional Arrangement, Water Resources Institutions / Water Law, Water Framework Directive, Water Policy, Standards, Regulations and Procedures (Union and Regional levels)
အမျိုးသားအဆင့် ရေအရင်းအ မြစ်ကော်မတီ နှင့် ၎င်း၏ အကြံပေးအဖွဲ့ အတွက် ရုံးဆောက် ပေးရန်။ ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့ပေးရန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးရန်၊ လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများကို လုပ် ဆောင် ခြင်း။ Building NWRC Secretariat and AG offices and Secretariat as well as staffing and empowerment, and capacity building.
စီးပွါးရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာ အောင် မြစ်ဝှမ်းဒေသ ရေရှည်တည်တံ့ ရေး ကို ထည့် သွင်းတွက်ချက်သော ဖွံ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသ တစ်ခုလုံးကိုလွမ်း ခြုံသော စီမံကိန်း (Ayeyarwady River Basin Master Plan) ရေးဆွဲခြင်း
ရေနှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်စင်တာ (Hydroinformatics Center) တည်ထောင်ခြင်း – အဆောက်အဦး၊ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရှိ ရေအရင်းအမြစ် အချက်အလက် များအား သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပြီး၊ ရေနှင့်ဆိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက် အထောက်အကူပြုစနစ် (Decision Support Systems) များ၊ ကွန်ပြူတာ မော်ဒယ် (simulation and forecasting models) များ တည်ဆောက်၍ စီးပွါးရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာ အောင်၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အကူအညီဖြင့် အဖြေ ရှာပေးရန်။ Hydroinformatics Centre – water operation centre of Myanmar – DSS or decision support organ of NWRC –
မြန်မာ့ရေဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးရန်၊ လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း (Capacity Building)
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု ၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှင့် သက်ဆိုင်သူ များပါဝင်နိုင်သော Stakeholders Forum ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ခြင်း
သေချာသော အခန်းကဏ္ဍတို့တွင် စောစီးစွာရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှု ခေါ်ယူ နိုင်ရန်တွက်ချက်ပြင်ဆင်ခြင်း (Preparation for Future Investments)တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Component 1 Organizational Structure